Xulka Qaranka Cameroon Oo Markii 5aad Ku Guulasytay Koobka Qaramada Qaarada Afrika +Sawirro | Warbaahinta Afgarad
Halkani waa : Warbaahinta Afgarad » Sports » Xulka Qaranka Cameroon Oo Markii 5aad Ku Guulasytay Koobka Qaramada Qaarada Afrika +Sawirro
Published On Monday, February 06, 2017 By admin. Under: Sports. Ciyaar u dhaxeysay xulalka qaramada Faraacida iyo Cameroon ayaa goor dhaweyd soo idlaatay waxayna guushu raacday xulka qaranka Cameroon.
Natiijada ciyaarta ayaa kuso idlaatay 1-2 ay guushu ku raacday xulka qaranka Cameroon oo sidaas ku hantay Markii shanaad koobka qaramada qaarada Afrika.
Goolasha ay Cameroon ku hanatay koobkan waxaa u ansixiyay xidigaheeda Nkoulou iyo Aboubakar.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay si diiran waxayna bilowgiiba labada xul isku dayeen inay fursado ay goolal ku dhalin karaan abuuraan.
Daqiiqadii 2aad Ayay xulka qaranka Masaaridu jaanta isla heleen waxaana ugu danbeyn kubad qurux badan diilinta goosha loogu hor geeyay El Said.
Fursadaasi ayuu El Said khasaariyay kadib markii uu darbo aad baaskoolada biyaha moodo ku tuuray goosha Cameroon waxaana si dhib yar ugu dhagay goolhayaha Cameroon.
Ciyaarta ayay maamulkeeda inta badan iska lahaayeen xulka Masar kuwaasi oo soo ban dhigay kubad aad u qurux badan.
Daqiiqadii 22aad Gooooooooooool! Ifafaalada kubada quruxda badan ee ay ciyaarayeen Egypt waxay muujinaysay inay hogaanka ciyaarta u qabanayaan. Wayna u qabteen run ahaantii.
Daqiiqadii 22aad ayay xulka Qaranka Egypt kubad macaan garabka midig kasoo dhiseen waxaana diilinta dhexdeeda baas loogu dhiibay Mohamed Elneny kaasi oo intuu nin baasaya iska dhigay goolhayaha Cameroon darbo gumac ah ku siray. Ciyaarta ayaa sidaasi ku noqotay 1:0 ay hogaamka ku hayaan Masaaridu.
Daqiiqadii 32aad ee ciyaarta Dhibaato! Wuxuu dhaawac soo gaaray xidiga Cameroon ee Taikeu kaasi oo isku qasbay inuu ciyaarta sii wato balse way u suurta gali wayday. Waxaa lagu bedelay saaxiibkiisa Nicolas Nkoulou.
Qeybtii Hore ee Ciyaarta ayaa sidaan kusoo idlaatay waxaana nasashada la aaday iyada oo Masar 1:0 hogaanka ku haysa.
Qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa la isku soo laabtay waxaana halkeeda kasii socda dagaalkii loogu jiray koobka labada dul caawa ka dhexeeyay.
xulka qaranka Cameroon oo aan qeybtii hore ee ciyarta si fiicsn uga dhex muqan ayaa markan soo baraarugtay waxayna hujuum culus ku qaadayeen gooodha Egypt. Daafacayada Masar ayaa khaati ka istaagnaa weerarada isdaba jooga ah e Cameroon waxaana la ogaa hadii ay halista Cameroon sidaan kusii socoto in Egypt Gool ka dhalan doono.
Xulka qaranka Masaarida ayaa daafac galay mana aysan qaadeyn weeraro badan. Markan waxaa siday goolka isaga soo bogi lahayeen dagaal u galay Cameroon.
Daqiiqadii 59aad Goooooooooooool! Xulka Qaranka Cameroon ayaa ciyaarta barbareeyay. Goolkan ayaa ku yimiday kubad dhiiga loo shubay oo uu madax wareer ah ka galay Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou oo ciyaarta bedel kusoo galay ayaa ka dhigay barbaro 1:1 ah.
Xulka qaranka Cameroon ayaa markan mooraal helay waxeyna sii wadeen weerarada dhul gariirka ah ee ay ku hayeen goosha Masar.
Daqiiqadii 70aad Xulka Qaranka Cameroon ayaa weerar rogaal celis ah qaaday waxaana kubad dhexda kala soo baxsaday Moukandjo kaasi oo diilinta horteeda darbad ka rideeyay balse daafaca Masar ayay kusii dhacday isla markaana waxey inyar u martay goosha Masar.
Daqiiqadii 88aad Gooooooooooool! Masar Waa Quusatay! Masar Waa Quusatay! Alla Muxuu Wakhti Xun Ahaa.
Daqiiqadii 88aad Ayay xulka qaranka Cameroon dhaliyeen gool kale. Goolkan waxaa diilinta horteeda kubad joog sare ah si qurux badan lugta ulasoo raacay Aboubakar kadibna inta uu daafac Masar ah ka dul qaatay Darbo jilicsan geeska midig ee hoose ka dhaliyay. Golhaye El Hadary oo inbadan Egypt badbaadiyay ayaa markan ku guul dareestay inuu goolkan ka badbaadiyo. Ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay 2:1 ay hogaanka ku hayaan xulka qaranka Cameroon.
Khalaas! Masar waa u dhamaatay ugu danbeyn ciyaarta waa soo idlaatay. Xulka qaranka Cameroon ayaa markoodii ugu horaysay ku guulaydtay koobka Afrika tan iyo sanadkii 2002.
Ugu danbeyn natiijada ciyaarta ayaa kusoo idlaatay 2:1 ay guushu ku raacday xulka qaranka Cameroon.
Xulka qaranka Cameroon ayaa si rasmi ah u noqday Qaranka ku guulaystay Koobka AFCON ee sanadkan 2017ka oo lagu qabtay wadanka Gabon.
« Daawo Wasiirka Arimaha Gudaha Faratoon Oo Ka Hadlay Safarka Galaydh + Madaxweynihii Hore Oo Dalka Lugusoo Dhaweeyey
Daawo: Garabkii UCID Ee Jamaal Cali Xuseen Oo Si rasmi ah Ugu Biiray KULMIYE + Xubno Miisaan leh Oo Kujira »